BAZARY MAHABIBO MAHAJANGA : Nametrahana sinibe 1000 litatra hanasana tanana
Nametrahan’ny kaominina ambonivohitra Mahajanga “citerne” na sinibe misy rano 1000 litatra sy savony hanasana tanana ny ao amin’ny bazary Mahabibo, ny sabotsy teo. Izany dia hiadiana amin’ny fihanaky ny Covid-21. 31 mars 2020
Tsy ampy ireny fanasana tanana kely napetraky ny mpiara-miombon’antoka, izay isaorana hatrany, noho ny habetsaky ny olona mifamezivezy hoy ny ben’ny tanàna. Misy ‘robinets’ miisa valo amin’io citerne io. Toerana telo no asiana azy io ankoatra ny eo Mahabibo dia eny amin’ny bazary Tsaramandroso, Marolaka ary eny amin’ny ‘Croisement cimetiere’. Ny tanjona ny hahafahana manasa tanana matetika na mihoatra ny impolo isan’andro aza, hoy ny ben’ny tanàna.
Ny zavatra rehetra mety andalovan’ny tanana na kasihan’ny tanan’ny olombelona dia mety hitondra ny virus avokoa, ny varavarana, ny latabatra , ny vola… ka ilaina ny fanasana tanana matetika no sady tsy tokony hikasikasika tarehy satria amin’ny maso, vava sy orona no ifindran’ny aretina. Misy ihany koa ny fanentanana ny olona hanaja ny elanelana 1 metatra.
Ny mpamonjy voina kosa no mamatsy rano isaky ny lany ireo ‘citernes’ ireo. Efa mavitrika kosa ny olona manasa Tanana sy mahatsapa fa ilaina izany. Ny fanasana Tanana amin’ny savony mantsy dia isan’ireo hetsika sakana amin’ny fipariahan’ny ‘coronavirus 2019’